"တရားလား" မှာ တွေ့ရမယ့် စိုးသူရဲ့ခပ်ဟော့ဟော့ စတိုင်များ
“တရားလား” မှာ တွေ့ရမယ့် စိုးသူရဲ့ ခပ်ဟော့ဟော့ စတိုင်များ
19 Sep 2018 . 10:20 AM
“တရားလား”ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာ စိုးသူရဲ့ ရိုက်ကွင်းပေါ်က သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို တွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စိုးသူဟာ အနုပညာလောကနဲ့ ကင်းကွာနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း ရိုက်ကွင်းပေါ်က ပုံတွေကို ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ခပ်ဟော့ဟော့ နဲ့ လန်းနေတာကိုတွေ့ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုလန်းနေအောင်လည်း ချစ်ရတဲ့သူဒါဒါက အနောက်ကနေ လိုက်လံပြင်ဆင်ပေးနေလို့ဖြစ်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ စိုးသူဟာသီချင်းဆိုကောင်းသူတစ်ယောက်အနေထင် လူသိများခဲ့ကြပေမယ့်လည်း အခုဆိုရင်သရုပ်ဆောင်ခြင်းကိုပါလုပ်ဆောင်တာကို တွေ့ရမှာပါ။
အရပ်အမောင်းကောင်းကောင်း နဲ့ ဥပဓိရုပ်ရှိသူဖြစ်တဲ့အတွက် အားပေးသူပရိသတ်ကလည်း အဆင်သင့်ရှိလို့ နေပါတယ်။စိုးသူရဲ့  အနုပညာလောက တကျော့ပြန်လို့ ပြောရမယ့် ဒီရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီး “တရားလား”ကိုတော့ ပရိသတ်တွေမျှော်လင့်နေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Photo Credit: Soe Thu Facebook Page
“တရားလား” မှာ တှရေ့မယျ့ စိုးသူရဲ့ခပျဟော့ဟော့ စတိုငျမြား
“တရားလား”ဆိုတဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားမှာ စိုးသူရဲ့ရိုကျကှငျးပျေါက သရုပျဆောငျနတေဲ့ ပုံရိပျတှကေို တှမွေ့ငျရမှာ ဖွဈပါတယျ။ စိုးသူဟာ အနုပညာလောကနဲ့ ကငျးကှာနတေယျဆိုပမေယျ့လညျး ရိုကျကှငျးပျေါက ပုံတှကေို ကွညျ့လိုကျရငျတော့ ခပျဟော့ဟော့ နဲ့ လနျးနတောကိုတှရေ့မှာလညျး ဖွဈပါတယျ။
ဒီလိုလနျးနအေောငျလညျး ခဈြရတဲ့သူဒါဒါက အနောကျကနေ လိုကျလံပွငျဆငျပေးနလေို့ဖွဈမယျလို့ ထငျမိပါတယျ။ စိုးသူဟာသီခငျြးဆိုကောငျးသူတဈယောကျအနထေငျ လူသိမြားခဲ့ကွပမေယျ့လညျး အခုဆိုရငျသရုပျဆောငျခွငျးကိုပါလုပျဆောငျတာကို တှရေ့မှာပါ။
အရပျအမောငျးကောငျးကောငျး နဲ့ ဥပဓိရုပျရှိသူဖွဈတဲ့အတှကျ အားပေးသူပရိသတျကလညျး အဆငျသငျ့ရှိလို့ နပေါတယျ။စိုးသူရဲ့ အနုပညာလောက တကြော့ပွနျလို့ ပွောရမယျ့ ဒီရုပျရှငျ ဇာတျကားကွီး “တရားလား”ကိုတော့ ပရိသတျတှမြှေျောလငျ့နကွေမယျလို့ ထငျပါတယျ။
5G Network ပထမဦးဆုံး မိတ်ဆက်ပြသလိုက်တဲ့ Mytel
by Zawyè . 1 month ago
တစ်ချိန်တုန်းက မိန်းကလေးတိုင်းလိုလိုရဲ့ ရင်ကို လှုပ်ခတ်စေခဲ့သူတွေ
by Ngul Ciin .2months ago
ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကအထိ ခြေဆန့်ခဲ့ကြတဲ့ ကိုရီးယား Celebrity များ (၁)
Call Me by Your Name မင်းသား Timothée Chalamet ပါဝင်တဲ့ အခြားဇာတ်ကားများ
by Naw Hsel Hte .7months ago